Somaliska - Lysekils kommun
Ku soo-dhowoow degmada Lysekil!
Halkaan waxaad ka aqrisan karta warbixin dheeraad, oo ku saabsan qaab-shaqaynta waxyaalaha Dowladda hoose ay mas’uul ka tahay. Xiriiriyeyaasha waxay kugu hogaaminayaan bogag-warbixineed dheeraad oo laakinse ku qoran af-iswiidish. Markii aad hawlwadeneyada Dowladda hoose xiriir la yeelanayso waxaa lagu ballamin kara qof turjubaan ah oo afkaaga hooyo ku hadla.
Ku saabsan degmada Lysekil
Degmada Lysekil waxaa qiyaastii ku nool 15 000 qof. Dowladda hoose waxay mas’uul ka tahay xannaanadda carruurta, dugsiyada iyo xannaanadda waayeelada. Dowladda hoose waxay kaloo mas’uul ka tahay, biyo-siinta degmada, biyaha wasakhaysan, dayactirka iyo nadaafadda waddooyinka, qashin-qubka, adeegyada gurmadka iyo ammaanka dab-kaca. Maktabadda degmada waxaad ka amaahan karta buugag waxaana ka heli karta warbixin. Dowladda hoose waxay hubsata jiritaanka goobaha dhaqdhaqaaqa wakhtilummiska, u hawlgasha taageero siinta ganacsiga iyo hawlgasha arrimaha bay’adda iyo tamarta. Waxaa muhim ah in dadyoowga ku nool degmada Lysekil ay ku qanacsan yihiin adeegyada maamulka degmada laga helo. Haseyeeshe, ka helida degmada waxay ku xiran tahay isxilqaamida qof kasta. Sida in qof kasta u ku dadaalo nadaafadda degmada iyo tixgelinta nidaamka u degsan goobaha dadwaynaha ka dhaxeeya.
Qodobada nidaamka degmada Lysekil u degsan
Haddii caawinaad aad u baahan tahay
Haddii u dab kaco, lagu kacay dambifal ama u qof keddis ahaan xannuunsado waxaa la waca [SOS Alarm], la garaaca lambarka gurmadka 112, ayaa ku caawin karo. Waxaa kaloo ku caawini karo Heeganka Maamulka adeegga bulshada, haddii tusaale ahaan lagu geystay handidaad ama fal xoog muquunis ku salaysan, kaasoo faleha u yahay qof aad qaraabo tihiin. Heeganka Maamulka adeegga bulshada waxaa lagala xiriiri kara: 0522-69 74 44.
Carruurta caawinaadda u baahan waxay la xiriiri karaan ururka [Rädda Barnen]. Waxaa lagala xiriiri kara lambarka 0200-77 88 20. Taleefan dirida waa lacag la´aan, magacaagana waad qarin karta.
Warbixinta Dowladda hoose ku saabsan Heeganka Maamulka adeegga bulshada ku qoran af-iswiidish
Warbixin ku saabsan ururka [Rädda Barnen] ku qoran luqado kala duwan
Barashada luqada iswiidishka ee soo-gaaleetiga loogu talagalay (sfi), waxay ka kooban tahay barashada luqada iswiidishka iyo aqoonta bulshada dalka Iswiidan. Shuruudaha waxbarshada noocaas lagu helo waxaa kamid ah in qofku u degan yahay dalka Iswiidan oona da’diisa aysan ka hoosayn 16 sano. Lexda bilood ugu dambayso ee sannadka u qofku buuxsanaayo ayuu waxbarashada bilaabi kara. Tan kale, qofku waa in usan weligii dhigan dugsiyada lagu barto af-iswiidishka. Waxaa jiraan makhaayado lagu barto af-iswiidishka. Warbixin dheeraad ku saabsan makhaayadaha noocaas [språkcaféer] oo ku yaalan degmada Lysekil.
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan barashada luqada iswiidishka ee soo-gaaleetiga loogu talagalay oo af-iswiidish ku qoran ”Svenska för invandrare”
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan makhaayadaha Maktabada ee loo yaqaanno [språkcaféer] oo af-iswiidish ku qoran
Warbixinta [Arken] ee ku saabsan makhaayadaha ee loo yaqaanno [språkcaféer] oo af-iswiidish ku qoran
Taageero iyo xannaanad
Dowladda hoose waxay mas’uul ka tahay in muwaatin kasta, la siiyo taageerada u xaalad-noololeedkiisa awgeed u baahan yahay. Baahida taageerada waxaa sabab u noqon kara da’da, itaaldarro, falxummada waxyaalaha maanka dooriya ama falalka ku salaysan xoogmuquuniska ee ka dhaca qoysaska. Taageerada waxay ka koobnaan karta adeegga guriga, goobaha kulamada, daawaynta wadahadalka ku salaysan ama caawinaadda dhinaca sharciyada.
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan xannaanadda iyo caawinaadda oo af-iswiidish ku qoran
Carruurta da’dooda u dhaxaysa 1 ilaa 5 sano waxaa lagu xannaanadeeya dugsiyada xannaanadda [förskola]. Laga bilaabo markii saddex sannadood ay buuxsadaan waxay xaq ku leeyihiin in lagu xannaanadeeya dugsiyada xannaanadda. Sharciga dalka Iswiidan u degsan waxaa ku xusan in carruurta da’dooda u dhaxaysa 6 ilaa 16 sano ay ku qasban yihiin dhigashada dugsiyada biloowga/hoose/dhexe oo sagaal sano ah (fasallada 1–9). Dhallinyarada dhamaystay dhigashada sagaalka sannadood ee dugsiyada biloowga/hoose/dhexe, waxay dhigan karaan dugsi sare. Markaas kaddib waxay dhigan karaan jaamacad, kulliyad iyo waxbarashada dadka waawayn loogu talagalay.
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan waxbarashada iyo xannaanadda carruurta oo af-iswiidish ku qoran
Xafiiska Shaqada waa hey’ad-dowladeed oo dadyoowga shaqo la’aanta ka caawisa sidii xiriir ay u la yeelan lahaayeen loo shaqeeyeyaasha. Adeegga Xafiiska Shaqada waa lacag la’aan. Dowladda hoose waxaa badi ahaan laga hela shaqo. Iyada iyo Xafiiska Shaqada waxaa ka dhaxeeyo wadashaqayn.
Warbixinta Xafiiska Shaqada oo af-iswiidish iyo luqado kale ku qoran
Guryaha ku yaalaan degmada Lysekil saf ayaa loo gala. Shirkadda guryaha ee Dowladda hoose [Lysekilsbostäder] waxaa laga hela aqal-dabakheedyo oo la kireysan karo. Haseyeeshe, kahor waa inaad shirkadda iska diiwan gelisa oo aad safka gasha. Fursadda helida hoyga waxay ka sii wanaagsan tahay haddii aad awood iibsashada guryaha iskaashatada ama aqal. Degamada Lysekil waxaa ku yaalaan shirkadaha ku dulaasha guryahay oo gaar ahaan loo leeyahay, kuwaas ayaa ku caawini karo.
Warbixinta shirkadda guryaha [Lysekilsbostäder] oo af-iswiidish ku qoran
Dhaqamada iyo wakhtilummiska
Maktabadda waxaad ka amaahan karta buugag, aqrisan karta wargeysyada ku qoran luqado kala duwan ama ka codsan karta warbixin. Degmada Lysekil waxaa laga hela dhaqdhaqaaqyo badan sida jir-dhaqdhaqaaqid, carro-geddisa iyo dhaqan. Waxaa la qabanqaabiya dhacdoono kala duwan sida bandhig-faneed, tartammo, kudhac iyo toddobaadka dhaqamada.
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan waxyaalaha aad ka sameeyn karto degmada Lysekil oo af-iswiidish ku qoran
Waa sidee hab-shaqaynta Dowladda hoose
Degmada Lysekil waxaa maamula wakiilo dadyoowga soo doorteen, siyaasiyiinta degmada, kuwaasoo xilliyada doorashada la soo doortay in ay ilaaliyaan danaha dadwaynha degmada ku nool. Waxaa la oran kara maamulida degmada waxay ku salaysan tahay siyaasad. Waakiiladii la soo doortay ayaa go’aan ka gaara arrimaha ugu waawayn. Go’amadooda waxaa xirgeliya hawlwadeneyaashada Dowladda hoose.
Warbixinta Dowladda hoose ee ku saabsan hab-dhiska Dowladda hoose oo af-iswiidish ku qoran